बच्चा जन्माउने एउटा 'प्रोजेक्ट' हो, 'आर यु रेडी टु गीभ वर्थ ?' - बच्चा जन्माउने एउटा 'प्रोजेक्ट' हो, 'आर यु रेडी टु गीभ वर्थ ?'
बच्चा जन्माउने एउटा ‘प्रोजेक्ट’ हो, ‘आर यु रेडी टु गीभ वर्थ ?’
२०७५, २४ माघ, 10:51:51 PM
अनुपमा दाहाल शास्त्रिय नृत्यमा स्नातक र नेपाली चर्या नृत्यमा प्रशिक्षित छिन् । मन्टेश्वरी तालिम र ध्यान, प्रशिक्षणमा समेत दख्खल राख्ने दाहालले संगीतको प्रशिक्षण भने गुरुदेव कामतबाट लिएकी हुन् । विगत एक दशकदेखि विभिन्न क्षेत्रमा उनी प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत छिन् । जसमा जीवन विकास, शास्त्रिय, अध्यात्म, चर्या नृत्य पर्दछन् । हाल ब्रिटिस स्कुल झम्सिखेल ललितपुरमा चर्या नाँच प्रशिक्षक र Belleza Studio मा व्यवस्थापक निर्देशकको रुपमा कार्यरत उनी गायक, रचनाकार र संगीतकार समेत हुन । उनी व्योमा कुसुम बुद्ध धर्म संघ (Byoma Kusuma Buddha Dharma Sangha) को सदस्य पनि हुन । बहुमुखी प्रतिभाकी धनी दाहालसँग जिन्दगी, अध्यात्म, खुशीका रंगहरु लगायत फरक प्रसंगमा सन्तोष खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :
जागिर, पैसा र इज्जतबाहेक मानिसलाई खुशी हुन अरु के चाहिन्छ ?
तृप्ती चाहिन्छ । मानिसले जिन्दगीलाई कसरी लिने हो त्यसमा भरपर्छ । मानिसले कुन कुरालाई कसरी लिने भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ, खुशी । हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक धार हुन्छ । जीवन भनेको दिन र रात जस्तै हो । म आफैँ पनि साधना गर्छु । मानिसको हरेक चरणमा जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ । जीवनमा हुने विभिन्न घटनालाई हेर्ने दृष्टिकाेणले नै मानिसलाई सुख र दुःखको अनुभूती दिलाउने हो । हाम्रो सोचाई, हाम्रो मन सकारात्मक छ भने सुख र खुशी त्यसैले दिलाउने हो ।
जीवनमा ध्यान(Meditation) कति महत्वपूर्ण हो ?
मैले १४ वर्षको उमेरमा नै ध्यान सुरु गरेकी हूँ । त्यो अवस्थामा मलाई भगवान् भनेको के हो भन्ने नै थाहा थिएन । मैले त्यो उमेरमा नै आफ्नो श्वास–प्रश्वासद्वारा सोचाईलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभव गरेकी थिएँ । हामी हाम्रो सोचाइलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नै दुःखी भएका हौँ । मेरो २५ औँ वर्षकाे ध्यान अनुभवले भन्दै छु, मानिसको हरेक क्रियाकलापसँग ध्यान जोडिएको हुन्छ ।हामी कुनै कुरा या काम गर्छौं त्यसमा हामीले ध्यान लगाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ । हाम्रो शरीरमा जुन एउटा संरचना छ त्यो एउटा शारिरिक अंश हो भने हामीसँग भावनात्मक अंश पनि छ । एकान्तमा बस्नु र आँखा चिम्लिएर ध्यानमुद्रामा बसेर श्वासको आवत–जावत हेर्नुमात्रै ध्यान होइन । शरिरमा भएका शारिरिक, मानसिक र भावनात्मक सम्बन्धको एकाकार स्वरुपलाई मिलाउन सक्नु ध्यान हो । हामीले दैनिक जतिपनि क्रियाकलाप गर्छौं, खाना बनाउने, हिँड्ने तथा दिन भरी गर्ने सबै क्रियाकलाप नै ध्यान हो ।
चर्या नृत्यको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि ?
चर्या नृत्य नेपालको एउटा ठूलो सम्पत्ति र निधी हो । योसँग मिल्दोजुल्दो नृत्य त पाइन्छ तर चर्या नृत्य नै भने फरक हो । साँच्चै चर्या नृत्य भन्नाले नृत्यङ्गनाले नै देवको भावना गरेर, नाचिरहेको ठाउँलाई देवमण्डल ठानेर, आएका आवाजलाई मन्त्र ठानेर नृत्यङ्गनाले त्यसलाई देवको भावनामा ढालेर नाच्नु पर्छ । यो बुद्ध धर्मसँग जोडिएको छ । भनिन्छ ८४ महासिद्धहरुबाट यो नाँच निस्किएको हो । उनीहरुले ध्यान गरेर आएका आफ्ना भावनाहरुलाई नाँचबाट निकालेका हुन् । यसको इतिहास हेर्ने हो भने स्वंयम्भू पूराणमा लेखिएको छ । त्यसबेलाको धर्मदत्त राजालाई सिकाएको पनि भनिएको छ । यो पुरानो इतिहास र गौरव बोकेको नाँच हो । हामीले नेपालमा यो नृत्य एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा लान सकिरहेको छैनौं । हलिउड, बलिउडमा शरिर मात्र हल्लाएर नाचेजस्तो होइन, यो नाँच । चर्या नाँचको महत्व गणना गर्न सकिँदैन । यो नाँच साधनादेखि नै पोख्त भएर नाच्न सक्नु पर्छ । मैले पनि सानो उमेरदेखि नै यो नाँच शुरु गरें । त्यतिखेर गाह्रो भएपनि अहिले हेर्दा म एउटा भाग्यमानी मानिसको रुपमा आफुलाई हेर्छु । अहिले एउटा शिक्षक भएर अरु मानिसलाई सिकाउन पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ । आफुलाई भाग्यमानी महसुश गर्दै नेपालमा यसको महत्व र भविष्य राम्रो देखेकी छु ।
युवाहरुले व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासका लागि के गर्न सक्छन् ? जो स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिला त मानिस शिक्षित हुनु नै पर्छ । विद्यालय या विश्वविद्यालयमा गएर लिने शिक्षा एउटा हो भने हामीले घरमा हाम्रो आमाबाट लिने शिक्षा बहुमुल्य हुनुपर्छ । एउटा आमा भएको नाताले कुनै बच्चा जन्माउनु र उसको शिक्षादिक्षा राम्रो हुनु मात्रैले पुग्दैन । उसलाई उचित संस्कार दिन सक्नुपर्छ । म एउटा ध्यानमा विश्वास गर्ने मानिस पनि हो । एउटा बच्चा जन्मिनु पूर्व नै गर्भावस्था(बीज) र जन्मिएपछि निरन्तर असल संस्काररुपी मलजल अति आवश्यक हुन्छ । स्विकृतीको, अनित्यको र तृप्तीको भावनालाई अविभावकले आत्मासात र अभ्यास गर्नुपर्छ । पहिला म स्वयंम बदलिएँ भनेमात्रै अरुलाई परिवर्तन गर्न सक्छु । मानिसमा यो भावना हुनुपर्छ कि पहिला म बदलिने हो । त्यसपछि मेरो सन्तान बदलिन्छ, घर बदलिन्छ, समाज बदलिन्छ । त्यसपछि मात्र देश बदलिने हो । कुनै बच्चा जन्माउनु छ भने बच्चा जन्माउन सक्षम बाबुआमा हुनु जरुरी छ । उचित संस्कार नभएका असक्षम बाबुआमाले बालबच्चा नजन्माउँदा नै हुन्छ । उचित संस्कार नभएका बाबुआमाले जन्माएका बाल बच्चाले सहि र गलत नै छुट्याउन नसक्ने अवस्था हुनपुग्छ । बच्चा जन्माउने र हुर्काउने कुरा ठूलो जिम्मवारीको कुरा हो । यसका लागि दम्पती सबै हिसाबले तयार, परिपक्क र लायक हुनुपर्छ ।
युवालाई ठूलो भएपछि भन्दा पनि बच्चा हुँदा नै के सहि के गलत भन्ने कुराबारे जानकारी दिन सक्नुपर्छ । युवा भनेको काँचो माटो जस्तै हो । समाजमा अनुशासन भन्ने कुरा हुनुपर्छ । ध्यान गर्ने भन्दैमा मानिसहरु छाडा भएर अनुशासनहिन भएर हिँड्नु हुँदैन । अहिले पनि गलत बाटोमा लागेका युवाहरुलाई ध्यान, साधनाबाट फेरि सुधार गर्न सकिन्छ । उनीहरुको सोचाइमा नै सकारात्मकताको भावना पलाउन दिन सक्यौँ भने धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छन । बाटो बिराएका र नकारात्मक बानी र बिचारमा लागेका युवाहरुलाई ध्यानका माध्यमबाट सकारात्मक सोचमा ढाल्न र सुधार्न सकिन्छ ।
हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई किन र कसरी जोगाउने ?
मलाई नेपाल धेरै नै मनपर्छ । मैले नेपालसँग सम्बन्धित धेरै गीतहरु लेखें । म विदेश पनि गएँ । मैले नै गीतको माध्यमबाट ‘विदेशको पानी नमिठो….’ भन्ने गीत लेखें । अहिले देश ७ वटा प्रदेशमा विभाजित छ । हरेक प्रदेशको आफ्नोपन र मौलिकता छ । त्यसो भन्दैमा हामी विश्व परिवेशसँग छिटै घुलमिल हुन नसक्ने हैनाैं । विश्वव्यापिकरणले गर्दा हाम्रो संस्कृति थोरै ओझेलमा परेजस्तो भएको हो । हामीले हाम्रो कला संस्कृतिलाई जोगाउन, प्रोत्साहन गर्न, अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो कला संस्कृतिलाई देखाउने हो । लुकाउने होइन । मलजल गर्र्ने हो । रुकुमको कुनै एउटा मौलिक संस्कार छ । काठमाडौंको पनि एउटा मौलिक संस्कार छ । हामी काठमाडौं आयौं भने रुकुमको मौलिकतालाई बिर्सनुपर्ने जरुरत छैन, सँगै लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ । हामी दशैं, तिहार, ल्होसार, क्रिसमस उही उत्साह र उमंगका साथ मनाइरहेका हुन्छौं । नेपालमा मौलिक धर्मसंस्कृति सहजै मान्न र मनाउन सकेका छौ । त्यसका लागि कुनै असहज अवस्था छैन । यो आगामी पुस्तामा पनि हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।
सौन्दर्य के हो र केका लागि ?
सौन्दर्य भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ । मनमोहक (Appealing) आकर्षक, सुन्दर । सौन्दर्यलाई हामीले कुन धारमा हेरेका छौँ त भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । मानिस, नारी, फूल, आकाश, हिलोमाटोको सौन्दर्य फरकफरक हुन्छ । हाम्रो हृदयलाई जे कुराले एकछिनको लागि खुशी दिन्छ । सबै कुरा बिर्साइदिन्छ, त्यो नै सौन्दर्य हो । नारीको सौन्दर्यतालाई मात्र सुन्दरता मान्न सकिँदैन । कोही चरा उडेको हेरर केही बेर सौन्दर्य महशुस गर्न सक्छ । कोही अरु केही कुराहरुलाई देखेर त्यही कुरामा हराउन सक्छ । यो हरेक मानिसको हृदयले महशुस गर्ने कुरा हो । म मेरो लागि नै सुन्दर हुन चाहन्छु । यसमा स्वास्थ, खानपान, शारिरिक हेरचाह, राम्रा सोचाईहरु पर्दछन् । दिमागभरी डर छ भने त्यस्तो मानिसको अनुहारमा दिमागको भद्दापन देखिरहेको हुन्छ । एउटा मानिसमा रुप, स्वास्थ, सोचाई, दैनिक काम, हृदयमा करुणा, माया सबै कुराको संयोजन छ भने त्यो एउटा सौन्दर्यको नमुना हो । ऐना हेर्दा मैले मेरो हृदयदेखि मप्रति नकारात्क भावना आउँदैन भने त्यो नै सौन्दर्य हो ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के–के कुरामा सुधार हुनुपर्छ वा के कुराको कमी छ ?
मैले नेपालको शिक्षा र नेपाल बाहिरको शिक्षामा धेरै फरक (Gap) देख्छु । मैले पहिला मेरो छोरालाई एउटा सामान्य नेपाली स्कुलमा पढाएको थिएँ । जहाँ एउटा रटान विद्या हुन्छ । मैले पनि घोकन्ते विद्या नै पढेको हो । मैले एउटा अनुच्छेद लेख्नु प¥यो भने पहिला घोकेर नै लेख्थेँ । मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन नै हुनुपर्ने देख्छु । शिक्षा दिने तरिका आधारभूत तहदेखि नै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । सबै कुरा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । म एउटा यस्तो अविभावक हो जसले आफ्नो छोरालाई नै नेपाली स्कुलबाट झिकेर इन्टरनेशनल स्कुलमा हालें । शुरुमा त म एकदम दुविधामा परेँ । छोराको होमवर्क हुँदैनथ्यो । घरमा खासै पढ्दैनथ्यो । यसै बीचमा ऊ पहिलो तीन महिनापछि नै परिवर्तन भएको पाएँ । हामीले नेपाली स्कुलको आइ.ए.(प्लस टु) मा पढ्ने तहको पढाई उनीहरुले ५ कक्षामा नै पाइसकेका छन् । यसले यो कुरा प्रमाणित भयो कि घोकेर होइन प्रयोग गरेर सिक्ने हो । प्रक्टिकल शिक्षा आवश्यक छ ।
संगीत के हो ? कस्तो संगीत सुन्ने ?
संगीत यस्तो या तेस्तो सुन्नुपर्छ भनेर म भन्दिन । मलाई भावनात्मक (Sentimental) संगीत मनपर्छ भने अर्कोलाई र्याप मनपर्न सक्छ, धार्मिक, आधुनिक, भक्ति संगीत (Devotional Songs) । यो मानिसको मानिसकता अनुसार फरक पर्न सक्छ । हामी दुःखी भएको बेलामा र्याप वा हँसाउने संगीत त सुन्दैनौं । यो मानिसको मानसिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मलाई प्रायः सेन्टिमेन्टल, मेलोडियस र मन छुने गीतहरु नै मन पर्छ ।
बच्चाहरुलाई उत्कृष्ट संस्कार दिन घर र विद्यालयमा के गर्न सकिन्छ ?
मैले धेरै कुरा अगाडी नै भनेको छु । पूरा परिवर्तत शुरुदेखि नै हुनु आवश्यक छ । बच्चा जन्माउने जोडीलाई बच्चा पाउनु पूर्व नै प्यारेन्टिङ गर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशतिर त संस्कार जस्तै भएको छ । बच्चा जन्माउनु भन्दा पहिला नै बाबुआमालाई अगाडी राखेर ‘आर यु रेडी टु गीभ वर्थ’ ? Are you ready to give birth ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सोधिन्छ । विदेशमा त अहिले बच्चा जन्माउने कामलाई प्रोजेक्टको रुपमा लिने चलन आएको छ । हाम्रो समाजमा धुलो माटो खेल्दै, लड्दै–पड्दै बच्चा हुर्कन्छन् । म आफैँ पनि यो कुरा महशुस गर्छु । मेरो बुबाआमाबाट राम्रो संस्कार पाएँ । मैले नराम्रो काम गर्दा पनि मेरो बाबुआमाले गाली गर्नु हुन्थ्यो । तर प्रेरणारुपी गाली हुन्थ्यो । जसले मेरो मनमा कुनै नकारात्मक दाग लागेन । हिनताबोध भएन । बच्चा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा बाबुआमाको हातमा हुन्छ । सकारात्मक संस्कारको विकास बालककालमा गराउने हो भने बच्चा जन्माउने दम्पतीले नै संस्कार पाएको हुनुपर्छ । दम्पतीले बच्चाहरुलाई सकारात्मक सोचको विकास गराउन सक्नुपर्छ । दम्पती र बच्चाबच्चीहरु बीचको सम्बन्ध मजमुत हुनु जरुरी छ । कुनैपनि कुरा बाबुआमासँग छोराछोरीले लुकाउन नपरोस् । बाबुआमा र छोराछोरी बीच विश्वासको वातावरण तयार हुनुपर्छ ।
जिन्दगी बाँच्दै गर्दा हरेक दिन आफ्नो खुशी गर्नुपर्ने दुईवटा काम के हो ?
हामी हाम्रो लागि बाँचिरहेका छौं कि छैनौं ? कसैको लागि राम्रो काम गरिन, कसैलाई मद्दत गरिन भने मेरो लागि त्यो दिन व्यर्थ हुन्छ । मेरो कारण अरु खुशी छ भने मेरो लागि खुशी त्यही हो । सबै मानिसको सामान्य बुझाई (Common Sense)ले गर्नुपर्ने काम भनेको प्रेम र करुणा हो । यसले मानिसका धेरै कुराहरुलाई परिवर्तन गर्छ र सुखमयी बनाउँछ ।
जिन्दगीलाई सहज र सरल प्राकृतिक कसरी बनाउने ? के गर्ने ?
स्वीकार भावको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ध्यान गर्नुपर्छ । आफ्नो नकारात्मक भावलाई चिन्नु जरुरी छ । कुनै मानिस तनाव, नकारात्मक भावबाट टाढा छैन । हामी सकारात्मक–नकारात्मक दुवै भावबाट मुछिएका छौं । हाम्रो कमजोरी भावबाट सजग भएर, त्यसलाई चिनेर, त्यो Dark Side (अँध्यारो पाटो)लाई चिनेर त्यसमा प्रकाश हाल्दै गयो भने मानिस सजग र सकारत्मक हुन्छ । मपनि रिसाउँछु तर सजग भएर । मैले त्रुटी गर्दा पनि लिमिटेशन (सिमा) नाघ्नु भएन । त्यो कुरा मानिसले आफुले आफुलाई चिन्ने हो र अगाडि बढ्न खोज्ने हो । अगाडि बढ्ने हो ।
हामीले आफु्ले आफुलाई कसरी उत्प्रेरणा दिने ?
मानव जीवन अमुल्य छ । मैले मानव जीवनलाई जोडेर धेरै गीत लेखेको छु । अन्य प्राणीभन्दा मानिस फरक छ । हामीसँग विवेक छ । अमुल्य मानव जीवनको महत्वलाई हामीले बुझेनौं भने त जीवन नरक समान छ । मानिसले जीवनलाई बुझेर सकारात्मक तरिकाले आफ्नो जीवन र समाज बदल्न सक्छ । मानिसको सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरणा संकल्प हो । हामीले पहिलेका पिंडीलाई हेरेर उनीहरुको जीवनबाट पाठ र प्रेरणा सिक्ने र अगाडी बढ्ने हो । मदर टेरेसा, महात्मा गान्धीजस्ता मानिस पनि हाम्रै समाजको उपज हुन् । उनीहरुको Foot Print (पदचाँप)लाई हेरेर अगाडी बढ्ने हो ।
मर्नुभन्दा अगाडी के चाहीँ गर्नुपर्छ ?
मलाई जीवनबाट पश्चाताप महशुस नहोस् । ‘जीवनभर म रुँदा अरु हाँसुन बेसरी, हाँस्तै बिदा हुन्छु म डाकी, जीन तिनु कृपा गरुँ ति माथि’ यो एउटा मेरो लय हो । म बाँचुन्जेल संघर्ष गर्नसकूँ । जानेबेलामा कुनै पश्चाताप नहोस् । अन्तिम समयमा पूर्ण सन्तुष्टिको अवस्थामा पुगूँ । कुनैपनि कुरा (राम्रा या नराम्रा) मा मलाई डाहा नहोस् । म सबै आशक्तिहरुबाट मुक्त हुन सकूँ । त्यो अवस्थामा मेरो प्राण गयो भने राम्रो ।
मानिसको जीवनमा पैसा, सम्पत्ति कति महत्वपूर्ण कुरा हो ?
पैसाले सबै कुरा सहज बनाउँछ । भगवान् बुद्धले नै भनेका छन् भोको पेटमा धर्म सिकाउन सकिँदैन । भोको पेट, पापी पेटको सवाल हुन्छ । पैसा भयो भने जीवन सुखमय नभएमा दुखमय । पैसा त्यत्तिकै त मिल्दैन । पैसा त्यत्तिकै बोटमा फल्दैन । त्यसका लागि जाँगर जोश र लगाव जरुरी छ । त्यसपछि मात्र पैसाको आगमन हुन थाल्छ । पैसा मानिसले जसरी पनि कमाएका छन् । तर मैले भन्न खोजेको मानिस कुनैपनि कुरामा दक्ष र सीपयुक्त (Skillful) हुनुपर्छ । त्यहि सीपबाट नै हामीले पैसाको आगमनलाई सहज कमाउन सक्छौं र जीवन नै सहज हुन जान्छ । आर्थिक समृद्धिले जिन्दगीको भौतिक र आध्यत्मिक दुवै पाटोलाई सजिलो बनाउँछ ।
बच्चाहरुको मनोविज्ञानका बारेमा ?
मलाई बालमनोविज्ञान मन पर्छ । बच्चाहरु औधी मनपर्छ । बच्चासँग धेरै समय बिताउन मनपर्छ । म बच्चा भनेपछि सबै कुरा बिर्सिदिन्छु । म बच्चाहरुदेखि कहिले नि थाक्दिन, मैले मेरो बच्चाहरुसँग बिताएको पल मेरो जिन्दगीको सुन्दरतम र अद्भूत समय हो । मेरो समयले नरोक्ने भए म अझ ५-६ वटा बच्चाहरु जन्माउँथे होला । म जहाँ पुग्छु बच्चाहरुले मलाई मामु भन्न छोड्दैनन् । मेरा अाफ्ना बाहेक धेरै बच्चाहरु छन् । म मेरो नातिनातिना कहिले होला भनेर पर्खिरहेको छु ।
तपाईलाई मन पर्ने किताब ?
लाईफ अफ मिलेरेपा (Life of Milarepa)। अर्को नट फर ह्यापिनेस (Not for Happiness).
देवदास, जहाँको प्रेम कथा साह्रै राम्रो छ ।
मन पर्ने गीत ?
तुजे याद किया…..
प्रेम गीतहरु मन पर्छ
माेहमद रफीका गीतहरु, किशोर कुमारका गीत, लता मंगेश्वरका गीतहरु ।
मन पर्ने ठाउँहरु ?
फर्पिङ बज्रयोगीनी, योगीनीको मन्दिरहरु जान मनपर्छ ।
टेनिस, जुन मैले खेल्न पाइन ।
आमिर खान, प्रियंका चोपडा,
नेपालीमा गौरी मल्ल, अनमोल केसी
दाल, भात ।
साडी र समय अनुकुलका पहिरन ।
बिहानको समय । बिहानीले नयाँ दिनको सुरुवात गर्छ ।
मन पर्ने रंग ?
अर्बपति मानिसहरुमा ?
बिल गेट्स, नेपालमा चाहीँ सुरज बैद्यको पर्सनालिटी, उहाँ सहयोगी भावना अधिक भएको मानिसहरु मध्येको एक हुनुहुन्छ ।